Ny Fampahalalam-baovao Rosiana: Tompon-dakan’ny Fahalalahan’ny Aterineto (Manomboka Izao) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2017 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Français, Español, English
Tao anatin'ny dimy taona lasa, tombanana ho 5,6 tapitrisa ny pejy habaka nakaton'ny governemanta Rosiana – tsy nahy ny ankamaroan'izy ireo, taorian'ny fampidirana lisitra mainty an'ireo adiresy IP iray manontolo hikendrena ireo mpandika lalàna tsirairay. Niampanga ireo loharanom-baovao antserasera madinika ny Roskomnadzor, mpanivana federaly ao Rosia, tahaka ireo tranonkala an'arivony mikasika ny zava-mahadomelina tsy ara-dalàna sy ny sarin'ankizy mamoha fady, ary ireo vavahadin-tserasera goavana ampiasain'ny olona an-tapitrisany, tahaka ny tranonkala torrent RuTracker tamin'ny taona 2015, ary ny tambajotra sosialy arak'asa LinkedIn tamin'ny taona lasa.
Nandritra izany fotoana rehetra izany, tsy mbola nilaza tamin'ireo mpijery mikasika ny vaovao momba ny fomba hialàna amin'ireo ezaka fanivanana ny tambajotra fahitalavitra Rosiana. Ny Roskomnadzor kosa, mandritra izany, nangataka tamin'ireo tsy mitonona anarana amin'ny aterineto mba hanaja ny lisitra maintin'ny governemanta ao Rosia, ary nanakatona tolotra proxy iray fara fahakeliny noho ny tsy fanajana izany.
Saingy inona no fahasamihafana afaka hoentin'ny andro.
Tamin'ny Talata, nanambara fandraràna ankapobeny ireo goavana maromaro ao amin'ny aterineto Rosiana ny filoha Okrainiana Petro Poroshenko, nandidy ny manampahefana mba hanakana ny fidirana amin'ny tambajotra sosialy Vkontakte sy Odnoklassniki, ny milina fikarohana Yandex, sy ny tolotra mailaka Mail.ru.
Amin'ireo Okrainiana an-tapitrisany ankehitriny izay mety ho tafala amin'ny tolotra antserasera ankafizin'izy ireo, nanao ny zavatra fanaony amin'ny toe-draharaha ara-jeografia-politika tsy nampoizina ny fampahalalam-baovao mahazatra ao Rosia, niova fijery tampoka izy, nipoitra ho mpanohana am-peo ny teknolojia tsy itononana anarana amin'ny aterineto, taorian'ny taona maro tsy niraharahiana ny sivana antserasera tao an-tanindrazana.
Nahasanganehana ireo mpikatroka fahalalahan'ny aterineto mihitsy aza ny fantsom-baovaom-panjakana Rossiya-24 tamin'ny fandefasana torolalana momba ny fomba hidirana amin'ny tranonkala voasakana amin'ny fampiasàna lohamilina proxy. Mahatsikaiky, satria efa voaràra tao Okraina nanomboka tamin'ny taona 2014 ity tambajotra ity, nandefa fandaharana momba ny torohevitra fialàna amin'ny sivana ho an'ny mpijery ao Rosia ny Rossiya-24, izay mbola misokatra ho amin'ny fihariana ny Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex, ary ny Mail.ru.
Vao mainka ho hafahafa kokoa ny fandehan-javatra raha toa ny Roskomnadzor ka manohy manakatona fandefasan-kafatra eo no eo izay tsy mety misoratra anarana ho “mpikararaka fanapariaham-baovao” any amin'ny fanjakana Rosiana. Efa nosakanan'ny manampahefana ny Zello, Line, sy ny Blackberry Messenger noho izy ireo tsy nety nisoratra anarana, ary nitatitra ny gazety Vedomosti tamin'ity herinandro ity fa nandrahona hanenjika ny Telegram, fampiharana karajia tsy mihamalaza hatrany, noforonin'i Pavel Durov, mpanorina ny Vkontakte ihany koa ny Roskomnadzor.